DIL-DILAACA DERBIGA NATO: ”Cidna Nacamleeyayaal u noqon mayno hadda kaddib” – Talyaaniga oo Maraykanka & NATO ku dhega hadlay Ruushkana la xiranaya! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DIL-DILAACA DERBIGA NATO: ”Cidna Nacamleeyayaal u noqon mayno hadda kaddib” – Talyaaniga...
DIL-DILAACA DERBIGA NATO: ”Cidna Nacamleeyayaal u noqon mayno hadda kaddib” – Talyaaniga oo Maraykanka & NATO ku dhega hadlay Ruushkana la xiranaya!
(Roma) 08 Juun 2018 – Isagoo ka jawaabaya digniinta NATO oo Roma u sheegtay inay faraha ka qaaddo cunaqabataynta la saaray Ruushka, ayuu ku xigeenka Wasiirka Koowaad ee Talyaaniga ee Luigi Di Maio hoosta ka xariiqay inaysan amar ka qaadan doonin cid kale, balse ay usoo dhowaan doonaan Ruushka.
Di Maio, oo sidoo kale ah Wasiirka Horumarinta Dhaqaalaha iyo la Raysal Wasaare xigeen – maaddaama uu xilkaa la wadaago Matteo Salvini – ayaa muujiyay in maamulkiisa qoowmiga ah ee Yurub saluugga ihi “aanu noqon doonin kuwo daciif ah oo wax loo yeeriyo” isla markaana aanay diyaar u ahayn diblomaasiyad ku dhisan “haye mudane”.
Isbahaysiga midigta ah ee haatan xukuma Talyaaniga ayaa iska caabinaya isbahaysiga NATO oo aad u dhaliilay war uu Talaadadii war aad loogu sacbiyay oo uu Wasiirka Koowaad ee Talyaaniga ee Giuseppe Conte ka jeediyay baarlamanka dalkaasi, kaas oo uu ku sheegay in cunaqabataynta Ruushka la saaray ay kaliya xanuujinayso dhaqaalaha Talyaaniga.
De Maio ayaa haatan xoojiyay moowqifkaa hore isagoo sheegay in waloow ay xubin ka yihiin NATO aysan cidna uga habran doonin inay xiriir daneed oo dhanka dhaqaalaha ah lasii wadaan Ruushka.
Yeelkeede, Xoghayaha Guud ee NATO Jens Stoltenberg iyo danjiraha Maraykanka u fadhiya NATO Kay Bailey Hutchinson ayaa Talyaaniga uga digey in ka xubin NATO ahaan ay tahay inaysan taabanin cunaqabataynta Ruushka – oo ah mid uu hindisey Maraykanku – maaddaama ay taasi bixinayso ishaaro khaldan oo kala qaybsanaanta NATO ah sida ay ku doodeen.
Previous articleWAR CUSUB: Maraykanka oo loogu hanjabey in laga cayrinayo ururka G7 haddii….
Next articleINA SALMAAN OO SOO LAABTAY: Amiirkii la la’aa ee Sucuudiga oo shaashadaha kasoo muuqday & dhibaato uu durba u gaystay dhaqaalaha Sucuudiga oo soo baxday! + Sawirro